Emeputala ụdị ọhụrụ nke Audacious 4.1 | Site na Linux
Mwepụta nke ihe omuma ohuru nke onye egwu egwu egwu 4.1 siri ike na mbipụta ọhụrụ a nkwado mbụ maka QT 6 ka egosiri dị ka atụmatụ ọhụrụ, yana nhọrọ iji kpokọta ihe ọkpụkpọ ọkpụkpọ na Qt na GTK.
Maka ndị na-amaghị Audacious, ị kwesịrị ịma na nke a bụ fechaa egwu egwu, sitere na oru ngo Beep Media Player (BMP), nke bụ ndụdụ nke ọkpụkpọ XMMS kpochapụwo.
Onye ọkpụkpọ na-akwado ndị kasị ewu ewu na audio formats, gụnyere ma ọnweghị oke na: MP3, AAC, WMA v1-2, Monkey's Audio, WavPack, ụdị nkwụnye dị iche iche, console / chip formats, Audio CD, FLAC, na Ogg Vorbis.
Nwere kọmpat, mpịachi, mkpànaka ndekọ ndepụta ihe nke na-enye gị ohere ịlele, ụdị, ịkpọgharịa, bufee ma chekwaa listi ọkpụkpọ egwu gị. Ọdịnaya nwere ike ịdọrọ ozugbo banye na listi ọkpụkpọ, na-eme ya ngwa ngwa ma dịkwa mfe itinye mgbasa ozi sitere na isi mmalite dị iche iche.
Nhazi ihe arụ dịkwa ike ma nwee mkpanaka. Enwere ike ịchekwa ma kwụnye nhazi ụda nhazi, ma hazie ka ịzie ihe atọrọ na akpaghị aka dabere na faịlụ a na-egwu.
1 Audacious 4.1 isi ihe
2 Etu esi etinye Audacious na Linux?
Audacious 4.1 isi ihe
Ndi an-kpọ, a chịkọtara nchịkọta nhọrọ interface abụọ, dabere na Qt na GTK. Enwere ike ime mgbanwe n'etiti ihu na ihuenyo nhazi, na-enweghị idezi faịlụ .desktop.
Na nsụgharị gara aga, Audacious gbanwere na interface dabere na Qt 5 na ndabara, mana na nzaghachi maka ọchịchọ nke ndị mmepe nke nkesa Debian na Fedora, a na-esonye nzukọ nke ihu abụọ ahụ.
Nhọrọ abụọ ahụ yiri na nhazi ọrụ, ma Qt interface na-eme ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ, dị ka ihe dị mfe ịnyagharịa na ụdị ọnọdụ ngosi ọkpụkpọ. Na Windows n'elu ikpo okwu, naanị Qt dabeere interface na-ekpe na ndabara.
Ọzọ mgbanwe na-adade ke ọhụrụ version bụ na ọ na-enye nkwado zuru ezu maka usoro ụlọ Meson, gbakwunyere nkwado mbụ maka Qt 6 agbakwunyere.
Emeela ngosipụta dọrọ na dobe na listi ọkpụkpọ na Channel Mixer na-akwado ọwa 2 na ntụgharị 4-chanel.
Nke mgbanwe ndị ọzọ nke na-apụta site na ụdị ọhụrụ ahụ:
E tinyela ngwa mgbakwunye ọhụrụ iji hazie hotkeys maka interface dabeere na Qt.
Agbakwunyere ikike iji wiilị igwe eji agagharị na egwu ahụ na interface Qt.
Kama ModPlug, a na-eji ngwa mgbakwunye ọhụrụ na crawler dabere na OpenMPT.
Nyere ikike iji zoo ihe mkpuchi album na ngalaba ozi.
A na-eme ka egwu egwu pụta ìhè.
Mpempe ozi nke ihe mejupụtara na-egosi ọnụọgụ nke ọwa okwu.
Agbakwunyere ikike itinye oge na-ezighi ezi iji zoo ọkwa.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya nke ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Etu esi etinye Audacious na Linux?
N'oge a na-ede isiokwu ahụ abanyeghị na ụdị ọkpụkpọ ọhụụ nke ụfọdụ ndị na-etinye Linux nkesa, yabụ ọ bụrụ na ngwugwu adịghị maka sistemụ gị, ị kwesịrị ichere ma ọ bụ chịkọta koodu isi, nke ị ga - enweta site na njikọ dị n'okpuru.
N'ihe banyere ndị bụ ndị ọrụ Ubuntu na nkesa ọ bụla ewepụtara ma ọ bụ dabere na ya, ha nwere ike ịwụnye ụdị ọhụrụ ahụ, mana ha ga-agbakwunye nchekwa na-esonụ na sistemụ ha.
Ihe ha kwesiri ime bu imeghe onu ma pinye iwu ndia:
Ozugbo emere nke a, ha ga-etinyerịrị ụdị ọhụrụ nke Audacious 4.1 na iwu ndị a:
Maka ndị bụ ndị ọrụ Arch Linux ma ọ bụ ụfọdụ sitere na ya, ha nwere ike ịwụnye ụdị GTK nke ihe ọkpụkpọ maka ugbu a, maka nke a, naanị ha ga-achọ itinye ebe nchekwa AUR tinye na faịlụ pacman.conf ma tinye onye ọkachamara AUR.
N'okwu a, were nke kachasị were, nke bụ yay, anyị ga-enwe ike ịwụnye onye ọkpụkpọ ahụ site na ịme iwu ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Audacious 4.1